३९ वर्षे यी महिलाले जिउँदा ३८ सन्तान जन्माइसकिन्, एक्लै गर्छिन् हेरचाह ! - Everest Dainik - News from Nepal
३९ वर्षे यी महिलाले जिउँदा ३८ सन्तान जन्माइसकिन्, एक्लै गर्छिन् हेरचाह !
एजेन्सी । युगान्डाकी ३९ वर्षे मरियम नबातान्जीले जिउँदै ३८ सन्तान जन्माइसकिन् । उनको विवाह १२ वर्षको उमेरमा भएको थियो । एक सालपछि नै उनले जुम्ल्याहा बच्चा जन्माइन् । त्यसबेलै डाक्टरलाई देखाउँदा थाहा भयो, उनको अन्डाशय असामान्य रुपले ठूलो छ, र गर्भनिरोधक औषधि उनका लागि घातक हुन सक्छ । त्यतिखेर नबातान्जीले सोचेकै थिइनन् कि शरीरको यो सानो विकृतिले उनलाई ३८ बच्चाको बोझ थोपरिदेला ।
दुई वर्षअघि पतिले पनि छोडिदिएपछि सबै सन्तानको हेरचाह नबातान्जीले एक्लै गर्दै छिन् । नबातान्जी आफ्ना सन्तानसँगै राजधानी कम्पालाबाट ५१ किलोमिटर परको गाउँमा बस्छिन् । अफ्रिकामा उनको परिवार सबैभन्दा ठूलो परिवार हो ।
१५ गर्भबाट जन्मेका ३८ जीवित सन्तानमध्ये ६ सेट जुम्ल्याहा छन् । चारपटक उनले तीन–तीन बच्चा जन्माइन् भने पाँचपटक चार–चार बच्चालाई जन्म दिइन् । एकपटक भने नबातान्जीका ६ सन्तान जन्मिए । तर, यीमध्ये कोही जीवित बसेनन् ।
पछिल्लोपटक अढाइ वर्षपहिले गर्भवती हुँदा उनको गर्भमा ६ सन्तान थिए । एउटाको गर्भमै मृत्यु भयो, जसका कारण कोही पनि जीवित जन्मन सकेनन् । यो गिनिज बुकको विश्व रेकर्डभन्दा भने निकै कम हो । १८औँ शताब्दीमा एक रसियाली महिलाले २७ गर्भबाट ६९ बच्चा जन्माएको रेकर्ड छ । बातान्जीका पति सधैँजसो घरबाहिर रहन्थे । उनले पत्नीको कहिल्यै राम्रो हेरचाह गरेनन्, उल्टै यातना दिइरहे । नबातान्जीको घरमा पतिको नाम अभिशापको रुपमा लिइन्छ ।
जीवनमा अनेकौँ हन्डर खानुपरेको नबातान्जी बताउँछिन् । वास्तवमा उनको यति धेरै सम्तान हुनुको कारण पनि त्यो अँध्यारो अतीत नै हो । जन्मेको तीन दिनमै आमाले उनलाई छोडेर गइन् । बाबाले अर्को बिहे गरे । सौतेनी आमाले सबै बच्चालाई काँचको गिलाँस तोडेर खानामा मिसाएर खान दिइन् । उनका सबै भाइबहिनी मरे, उनको भने बल्लतल्ल ज्यान जोगियो ।
सात वर्षे नबातान्जी घरबाट भागेर आफन्तको शरणमा पुगिन् । उनले ६ सन्तान जन्माएर फेरि आफ्नो परिवार बनाउने संकल्प गरिन् । तर, अन्डाशयको विकृतिले उनलाई सोचेभन्दा ६ गुना बढी सन्तान दिलायो । अहिले उनको दिनचर्या नै परिवार सम्हाल्नु हो । पैसा कमाउनेदेखि बच्चाको हेरचाह गर्ने उनी नै हुन् । पैसा जुटाउन उनी हेयर ड्रेसिङदेखि कबाडी सामान बेच्नेसम्मका काम गर्छिन् ।
नबातान्जीको सबैभन्दा ठूलो सन्तान २३ वर्षको भयो । जेठो छोरा किबुका आफ्नो आमालाई हरसम्भव मद्दत गर्छन् । आर्थिक संकटका कारण उनले माध्यमिक तहभन्दा माथि पढ्न पाएनन् ।
ट्याग्स: मरियम नबातान्जी, युगान्डा
कोरोना परिक्षण नहुँदै क्वारेन्टाइनमा मृत्यु
जेठ २५ पछि छोटा र असारदेखि लामो दुरीका सवारी खुल्ने !
बेलायतमा कोभिड–१९ को सम्भावित खोपको उत्पादन शुरू
भारतमा पनि घाँटीमा घुँडा राखेर प्रहरीद्वारा कुटपिट (भिडियोसहित)
कपिलवस्तुमा फेरि थपिए संक्रमित
कमजोर बन्दै चक्रवातः आज देशभर वर्षा, भोलिदेखि सुधार हुने
फेरि थपिए ३ संक्रमित